Home » Tag Archives: ကို Canon
Tag Archives: ကို Canon
NAB SHOW 2018 ကို AT AATON-TRANSVIDEO FROM မှအထင်ကြီးထုတ်ကုန်အသစ်
COLORFRONT ON-SET နေ့စဉ် & EXPRESS နေ့စဉ် 2017 VERSIONS နောက်ထပ် RAW ON-SET အာဏာနှင့် UHD / HDR စွယ်စုံ Deliverable
NAB 2017, Las Vegas မှာ, ဧပြီ 24, 2017 - Colorfront (www.colorfront.com), ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများများအတွက် high-performance ကို, On-set ကိုနေ့စဉ်သတင်းစာများနှင့် transcoding စနစ်များ၏အကယ်ဒမီနှင့်သူဟာ Emmy Award ဆု-အနိုင်ရဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, High-end Episode TV နဲ့ ကြော်ငြာ, NAB 2017 ကာလအတွင်းက Ultra High Definition (UHD) နှင့် High Dynamic Range (HDR) ပုံရိပ်-အပြောင်းအလဲနဲ့၎င်း၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Express ကိုနေ့စဉ်နှင့်တွင်-သတ်မှတ်မည်နေ့စဉ်စနစ်များ၏ 2017 ဗားရှင်းတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Express ကို ...
Presteigne အသံလွှင့်အရစ်ကျ 2K အတွက်£ 4M ထက်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
Presteigne အသံလွှင့်သည်ယနေ့ငှါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ထပ်မံနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်အတူ၎င်း၏ခြောက်သွေ့တဲ့အမြတ်ရခြင်းအစတော့ရှယ်ယာသိုလှောင်မှုအားကောင်းလာစေရန် Sony, Canon, Blackmagic, Vinten နှင့်အခြားသူများထံမှအသစ်သောထုတ်လွှင့်နည်းပညာ£ 2M ထက်ပို၏ပေးပို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ 4K / UHD လက်ခံမှုရဖို့ဆက်လက်အဖြစ်, Presteigne 4K ကင်မရာနှင့်၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မျက်ကပ်မှန်အဘို့အတောင်းဆိုမှုများ၏ mounting အရေအတွက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ် ...
Codex သစ်ကိုကို Canon ရုပ်ရှင်ရုံ EOS C700 ကင်မရာအသံဖမ်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကယ်တင်တတ်၏
ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ပညာထုတ်ကုန်လိုင်းအတွက်လာမယ့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များအတွက် RAW မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့လာသောအခါကို Canon တစ်ဖန် Codex (www.codex.online) ကိုလှည့်။ ကို Canon နှင့် Codex အကြား On-going မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများ '' အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကရုပ်ရှင်ရုံတစ်က high-performance ကို, ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်နီးကပ်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်မမြင်စဖူး၌ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုဇာတ်စင် ...
နောက်ဆုံးထွက်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်း Arri ကနေ, Canon, Panasonic က, Sony နဲ့ပိုအတူ Adorama ခေါင်းစီးသတင်း NAB 2016
နယူးယောက်, နယူးယော့ - မတ်လ 23, 2016 - Adorama, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, အသံ, ပုံရိပ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏တဦးတည်း, ဧပြီကနေ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌အရပျကိုယူတဲ C2016 မှာ 7408 NAB Show မှာပြပါလိမ့်မည် 18st မှတဆင့် 21th ။ တက်ရောက်လာသည့် Adorama Pro ကိုမှကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်ဗဟိုခန်းမထဲမှာ Adorama သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် ...
စီမံကိန်း "ဟုအဆိုပါအိုးအိမ်မဲ့၏မျက်လုံးမှတဆင့်" Adorama နှင့် Canon ၏ပံ့ပိုးမှုနှလုံးသားပြခန်း NYC
နယူးယောက်, နယူးယော့ - နိုဝင်ဘာလ 16, 2015 - Adorama, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံများထဲမှ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ, ပုံရိပ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်လီရောင်းသူများ, "စိတျနှလုံးပြခန်းနယူးယောက်နှင့်အိုးအိမ်မဲ့န်ဆောင်မှုများအစပျိုးမှု၏နယူးယောက်ဦးစီးဌာနကိုထောကျပံ့ဖို့ကင်မရာထုတ်လုပ်သူကို Canon နှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းဖြစ်ပါတယ် ရန် 25 ကို Canon PowerShot G7-X ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းကင်မရာများနှင့်ဓာတ်ပုံသင်တန်းပေးခြင်းပေးခွငျးအားဖွငျ့ "ဟုအဆိုပါအိုးအိမ်မဲ့၏မျက်လုံးမှတဆင့် ...
Otto NEMENZ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငှားရမ်းမှု INVENTORYat 50 #NABShow ဖို့ Canon Cine-SERVO 1000-2015MM ultra-telephoto zoom မှန်ဘီလူးများဖြည့်စွက်
Canon ၏အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, Otto Nemenz အင်တာနေရှင်နယ်, Los Angeles မြို့, CA. အခြေစိုက်ကမ္ဘာကျော်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီမှပထမဦးဆုံးကို Canon Cine-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 က Ultra-Telephoto မှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူးကိုအပ် အော့တို Nemenz ငှားရမ်းများအတွက်ကို Canon Cine-SERVO 50-1000mm မှန်ဘီလူးပူဇော်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပထမဦးဆုံးစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ Canon ၏ ultra-telephoto Cine-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 က Ultra-Telephoto မှန်ဘီလူးမိတ်ဆက် ...
Canon ၏အဆိုပါ Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော် 2015 (2015 NAB Show မှာသူတို့ကိုကြည့်ရှုပါ!) ထုပ်
ah, Utah - ကြီးမြတ်နှင်းလျှောစီး၏အိမ်, အဆိုပါ Utah ဂျက်ဇ်ဂီတရောဘတ်ရက်ဖော့က The Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်အခမ်းအနားဖို့ရာပဲပတ်ရစ်-Up ကို Canon ကို Creative စတူဒီယို, adjoined တနင်္လာနေ့ည, ဇန်နဝါရီလ 26th သည် Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖေဖော်ဝါရီလသည်အထိဆဲခဲ့ 1st ။ ကို Canon ကို Creative စတူဒီယိုပေး, အ Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သောဖန်တီးမှုပရမ်းပတာထံမှဆိပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ...
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတန်ငယ်ထုတ်ကုန်-based ကုမ္ပဏီများနှင့်ဝန်ဆောင်မှု-based ကုမ္ပဏီများသည်အကြားကွဲပြားနေသည်။ အများစုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအလယ်၌တစ်နေရာရာမှာလဲလုံးဝထုတ်ကုန်-based သို့မဟုတ်လုံးဝဝန်ဆောင်မှု-based မရှိကြပေ။ တစ်ဦးကရေပိုက်ပြင်သမားဥပမာ, လုံးဝဝန်ဆောင်မှု-based မျှမက, အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများအများဆုံးပြုပြင်ရေးသို့မဟုတ်ပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေးနှင့်အတူရောင်းချကြသည်။ အသံလွှင့်ဖြစ်စေ, စင်ကြယ်သောဝန်ဆောင်မှုမျှမက, ထုတ်ကုန်လုပ်ပြီးပါပြီ ... နဲ့ content အသံလွှင့်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ...
Adorama Apple ရဲ့နယူး 5K ု့ကပ်ရေးနှင့် CCW မှာပို Pro ကိုဂီယာဟာ Off ဖော်ပြပေး 2014
Retina 1157K ပြရန်နှင့်အတူသစ်ကို Apple က4"iMac အမှတ်တံဆိပ်အပေါ် 27K ရိုက်ကူးရှုမြင်ပေါင်း Blackmagic, Canon, Sennheiser, TASCAM နှင့်ပိုပြီးအနေဖြင့်လိုင်းကင်မရာများ, မျက်ကပ်မှန်နဲ့ audio ဂီယာ၏ထိပ်နှင့်အတူလက်ရမှတဲ5မှာ Adorama သွားရောက်ကြည့်ရှု; နိုဝင်ဘာလ 6, 2014 - - နယူးယောက်နယူးယောက်ရှိ CCW ကုန်စည်ပြပွဲ, နယူးယော့မှာဖေါ်ပြသည် Adorama, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတဦး ...
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (533) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)